06/07/14 ~ Myanmar Forward
သုံးလခံ ကိုယ်ဝန်တားထိုးဆေးက မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးဥ မထွက်အောင် ဆောင်ကျဉ်းပေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သားအိမ်အဝက ချွဲကို စေးပျစ်စေလို့ ဝင်လာမဲ့ သုက်ပိုးအတွက် ခက်ခဲစေတယ်။ သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာကိုလဲ ပါးစေသေးတယ်။ မျိုးဥ ထွက်စေပါ၊ ထွက်အုံးတော့ သုက်ပိုးအဝင်ခက်စေမယ်၊ ဝင်လာနိုင်လို့ နှစ်မျိုးတွေ့ပြီးအုံးတော့ အထဲမှာမတွယ်စေနိုင်ဘူး။
• ထိရောက်မှု သုတေသနတွေအရ ဝ% ကနေ ၂့၆% သာ လိုရာမရောက် ဖြစ်ပါတယ်။
• ၃ လနေမှ တခါထိုးရတယ်။
• တခြား ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲတွေလောက် ဆေး (အက်ရှင်) ဖြစ်တာတွေ နဲတယ်။
• Estrogen ဟော်မုန်းမပါလို့ DVT အတွင်းပိုင်းက သွေးပြန်ကြောပိတ်တာ၊ PE အဆုပ်သွား သွေးကြောပိတ်တာ၊ Stroke နှလုံး-သွေးကြောပိတ်တာ အန္တရာယ် မစိုးရိမ်ရဘူး။
• သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်မဲ့ အန္တရာယ်နဲတယ်။
• သွေးအားနဲရောဂါ၊ တင်ပဆုံတွင်းအင်္ဂါရောင်တာ၊ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ၊ သားအိမ်အကျိတ်ဖြစ်တာတွေနဲတယ်။
• Endometriosis သားအိမ်ရောဂါရှိနေသူ ခံစားရတာတွေ နဲတယ်။
• အစကထဲက ရာသီဆင်းချိန်မှာ နာတာ၊ မျိုးဥထွက်ချိန်မှာ နာတတ်တာ၊ မျိုးဥအိမ်အလုံးဖြစ်တာလဲ နဲတယ်။
• အတက်ရောဂါရှိနေသူ အတက်ဖြစ်တာ နဲစေသေးတယ်။
• သွေးရောဂါတမျိုးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ Sickle cell crises ဆိုတာ အဖြစ်နဲတယ်။
• နို့တိုက်မိခင်တွေ သုံးနိုင်တယ်။
• မွေးပြီး ၁ လခွဲ ရှိမှထိုးတာ ပိုကောင်းတယ် မဟုတ်ရင် သွေးဆင်းနေတာ များတတ်တယ်။ နို့မတိုက်သူဆိုရင် ၁ ပါတ်အတွင်း ထိုးလို့ရတယ်။
ဒီဆေး မထိုးသင့်သူတွေကတော့ -
• Deep vein thrombosis (DVT) အတွင်းပိုင်းက သွေးပြန်ကြောပိတ်ရောဂါ ရှိနေသူ၊
• PE အဆုပ်သွား သွေးကြောပိတ်ရောဂါ ရှိနေသူ၊
• မိုင်ဂရိန်း ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ရှိနေသူ၊
• Liver diseases (Acute viral hepatitis, severe Decompensated cirrhosis, Benign or malignant liver tumors) လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ အသဲရောဂါ ရှိနေသူ၊
• Stroke နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ ရှိနေသူ၊
• ဆီးချိုဖြစ်တာ အနှစ် ၂ဝ ကြာနေသူ၊
• သွေးတိုးနေရင် သတိထားသုံးပါ၊
• နို့ကင်ဆာ ဖြစ်ထားသူ၊
• လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို အကာကွယ် မပေးနိုင်ပါ။
ရာသီ စဆင်းတဲ့ နေ့ကနေ ၅ ရက်အတွင်း ထိုးရင် ချက်ချင်း ထိရောက်တယ်။ ၅ ရက်နောက်မှ ထိုးရင် ၂ ပါတ်ကြာမှ ထိရောက်တယ်။ ကလေးပြန်ရဘို့ နောက်ကျ စေတယ်။ ဆေးထိုးတာ ရပ်ထားပြီးနောက် ၉ လ၊ ၁ နှစ်ခွဲကျမှ ကလေး ပြန်ရနိုင်ကြတယ်။ ၁ နှစ်ခွဲနေရင်တော့ တခြား တားနည်းတွေလိုဘဲ ကလေး ပြန်ရနိုင်စွမ်းက အတူတူဘဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လေ့လာမှုတခုအရ ဆေးထိုးရပ်ပြီး ကလေးပြန်ယူတော့ အလေးချိန်နဲတဲ့ကလေး မွေးနှုန်း များတာ တွေ့ရတယ်။ စမ်းသပ်တာကလဲ ဆင်းရဲသူတွေမှာပါ။
• သွေးမဆင်းတာ၊ (၁ နှစ်တာ ထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၅၅%၊ ၁ နှစ်တာ ထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၆၈% ရာသီမလာတာ တွေ့ရတယ်။)
ဆိုးကျိုးတွေ ဘယ်လိုရှိသလဲသိဘို့ ဒီဆေးကို ၇ နှစ်ကြာ ထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်း ၄ဝဝဝ လောက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
• သူတို့ထဲက ၅% ကျော်ကျော်မှာ ရာသီမမှန် (များသူ + မလာသူ)၊ ဗိုက်နာ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲ၊ အားယုတ်၊ ခေါင်းမူး၊ စိုးရိမ်၊
• ၁% ကနေ ၅% အထိတွေမှာ ဆက်ဆံလိုစိတ်နည်း၊ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာ၊ ခါးနာ၊ ရင်သားနာ၊ ခြေထောက်နာ၊ စိတ်ကျ၊ အနီပြင်ထွက်၊ ပျို့၊ အိပ်မပျော်၊ အဖြူဆင်း၊ ခြေထောက်ယောင်၊ ဝက်ခြံပေါက်၊
• ၁% ထက်နည်းသူတွေမှာ အသားဝါ၊ ဆီးလမ်း-မွေးလမ်းရောင်၊ တက်၊ အစားပျက်၊ ဝမ်းမမှန်၊ ဝမ်းသွေးပါ၊ ဆက်ဆံချိန်နာ၊ ရင်ပတ်နာ၊ သွေးအားနည်း၊ အလာဂျီရ၊ အိပ်ချင်၊ ဖျား၊ ချမ်း၊ အသားအရေခြောက်၊ ပန်းနာ၊ ရင်ခုန်မြန်၊ ချွေးပိုထွက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ လေဖြတ်၊ ရေငတ်၊ အသက်ရှူမဝ၊ ရာသီလာစဉ်နာ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသလို ခံစား၊ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးပြန်မရ၊ သွေးပြန်ကြောရောင်၊ ဆက်ဆံလိုစိတ်ပို၊ နို့ထွက်နည်း၊ ရင်သား အရွယ်ပြောင်း၊ ရင်သားထိပ်က သွေးထွက်၊ ရင်သား-ကင်ဆာ၊
“အထူးသတိပေးချက်” ကတော့ Osteoporotic effects ဆိုတဲ့ အရိုးအားနဲတာ ပိုကြာစေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် FDA ကနေ ၂ဝဝ၄ ကစပြီး၊ သတိပေးချက် ထည့်လိုက်တယ်။ FDA က ၂ နှစ်ထက်ပို မသုံးနဲ့လို့ ပြောတယ်။ WH- ကတော့ ဒါ့ကြောင့်တော့ ဒီဆေးမသုံးနဲ့လို့ မပြောသင့်ဘူး ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် ACOG ကလဲ WH- နဲ့ သဘောတူတယ်။ တခြားတားနည်း ပြောင်းသုံးစရာ မရှိရင် ရပ်စရာ မလိုပါဘူးတဲ့။
ယောက်ျားတွေအတွက်လဲ သုံးတယ်။ မုဒိန်းကောင်တွေကို Chemical castration ဆေးနဲ့ သင်းကွပ်ပေးတာပါ။ လိင်စိတ် သိသိသာသာ နဲသွားစေမယ်။
Posted by drmyochit Saturday, June 07, 2014, under ဟာသ | No comments
တာတီး ( Tar Tee ) တစ်ယောက်.. လုပ်လက်စအလုပ်တွေကို အလောတကြီး စိတ်စောစွာနဲ့ ပီးစီးအောင် လက်စသတ်နေတယ်။
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းထားတာက ည ၇ နာရီ.. ခု ၆ နာရီခွဲနေပီ…
ဒီနေ့က.. အရေးကြီးသည်.. အချိန်မှီ မသွားလို့မဖြစ်…
ခါတိုင်းဆို တာတီးတို့က ဒီလိုမဟုတ်.. ရည်းစားကို အိပ်ထဲက ဖားလို သဘောထားတာ..
ဘယ်အချိန်ထုတ်ရိုက်စားစား အေးဆေးပါဆိုတဲ့ လူစားမျိုး…
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့များတွေ့လို့ကတော့.. တခွက်တဖလားမော့ပီး ရည်းစားချိန်းတာကို မေ့ချင်မေ့နေတတ်တာမျိုးလေ..
ရည်းစားကစိတ်ကောက်လို့…နောက်နေ့မှ ချော့ရပေါင်းလဲ.. မနည်းတော့ဘူး…
အဲ.. ဒီနေ့မနက်ကတော့.. သူ့ကောင်မလေးက ညဖက်တွေ့ဖို့ ဖုန်းထဲကို messsge ပို့ပီး ချိန်းဆိုလာတယ်…
ဒီတစ်ခါတော့.. သူ့ကောင်မလေးရဲ့ message ကိုဖတ်ပီး.. တာတီးတစ်ယောက် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူး နဲ့…
” ဟိုက်..စ်.. ဒီတစ်ခါတော့ မသွားရင်မဖြစ်တော့ဘူး…အမငီး.. နာ့ဟာလေး..နာ့ဟာလေး..”
ဟု.. တဖွဖွရွတ်ဆိုပီး.. အလုပ်ကို ကုန်းရုန်းလုပ်နေလေတော့သည်..
သူ့ကောင်မလေး ပို့လိုက်သည့် message မှာ…
” တော့.. ကိုရင်တာတီး.. ကျမ ရှင့်ကို အကြီး ကြီး တင်းနေပီ တိလား.. ကျမချိန်းတိုင်း ရှင်မလာဖြစ်တာတွေ များနေပီ.. ဆက်ပီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး..
ဒီည ၇ နာရီ ကျမကို လာတွေ့ပါ..
ပျက်ကွက်လို့ကတော့.. ရှင့်ခေါင်းအုံး သူများ အုံးသွားပီသာမှတ်..ဒါဗျဲ..!! ”
” ရှင်မလာ.. ရှင်သာ..ငတ်..
ရှင့်နေရာ… လူမလပ်..ဒချိ…! ”
ရွှေမန္တလာခရီးသည်တင်ယာဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား၊ လူအသေအပျောက် မရှိ
Posted by drmyochit Saturday, June 07, 2014, under မှုခင်း | No comments
လားရှိုး၊ ဇွန် (၇)
ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့ ၊ နံနက် ၇ နာရီခန့် တွင် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) သီပေါမြို့ နယ်၊ စံလောင်းကျေးရွာ အနီး၊ မိုင်တိုင် အမှတ် (၁၃၄/၄)တွင် မန္တလေးဖက်မှ လားရှိုးသို့မောင်းနှင်လာသော ရွှေမန္တလာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် လားရှိုးဖက်မှ မန္တလေးဖက်သို့မောင်းနှင်နေသော ကင်တာကုန်တင်ယာဉ်အား တိုက်မိပြီး မြေသယ်ယာဉ် တစ်စီး အား ဆက်တိုက်မိကာ သစ်ပင်တစ်ပင်နှင့်တိုက်မိရပ်တန့် သွားခဲ့ရာ ရွှေမန္တလာယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်လိုက်များ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ခရီးသည် အသေအပျောက်မရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၃၄/၄) အနီးတွင် မန္တလေးဖက်မှ လားရှိုးသို့ယာဉ်မောင်း အောင်မြင့်စိုး (၃၁) နှစ် မောင်းနှင်လာသော ၅ဃ/xxxx Scana အစိမ်းရောင် ရွှေမန္တလာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် လားရှိုးဖက်မှ မန္တလေးဖက်သို့ယာဉ်မောင်း ဖြိုးရဲရင့်လွင် မောင်းနှင်လာသော 4G/xxxx ကင်တာ အပြာရောင် ကုန် တင်ယာဉ်အား တိုက်မိပြီး တစ်ဆက်တည်း ယာဉ်မောင်း စိုင်းအောင်ညွန့် မောင်းနှင်လာသည့် CNJ တံဆိပ် မြေသယ်ယာဉ်အ၀ါရောင်၏ ယာဉ်ဦးခေါင်းတံခါး ၀ဲဖက်ခြမ်းသကို ထပ်မံတိုက်မိကာ လမ်းဘေးရှိ သစ်ပင်တစ်ပင်နှင့် တိုက်မိပြီး ရပ်တန့် သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ရွှေမန္တလာခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း အောင်မြင့်စိုး နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် ကျော်နိုင် တို့ မှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ အသီးသီးရရှိသွားခဲ့ပြီး မြေသယ်ယာဉ်မောင်းနှင်သူ စိုင်းအောင်ညွှန့် မှာ ငယ်ထိပ်ပေါက်ပြဲ ဒဏ် ရာ အသီးသီး ရရှိခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား သီပေါပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ရဲဆေးစာဖြင့် ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ယာဉ်တိုက်မှုကို သီပေါမြို့ မရဲစခန်းတွင် ယာဉ်(ပ)၃၀/၁၄ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်၍ ဒုရဲအုပ် သိန်းနိုင် က စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးမြို့မာန်ဆူအဝေးပြေးကားကွင်းမှ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် သို့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်တင် express ယာဉ်များကို မကြာသေးမှီက ကြံ့ခိုင်ရေးစစ်ဆေးခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာက ယာဉ်မောင်းချိန် (၈) နာရီထက် ပို၍ ကြာမြင့်မည့် ခရီးစဉ်အတွက် ယာဉ်မောင်း (၂) ဦးထားရှိရန် ညွှန်ကြားထားသော်လည်း ယာဉ်အများစုတွင် ယာဉ်မောင်း တစ်ဦးတည်းသာ ပါရှိပြီး တာယာပန်းမရှိခြင်း၊ မီးသတ်ဆေးဗူး စနစ်တကျ မဆောင်ထားခြင်း၊ အရေး ပေါ် အခြေအနေကို တုန့် ပြန်ရန် ကားပေါ်တွင် တူ၊ ပုဆိန်၊ မီးသတ်ဆေးဗူး၊ ဆေးသေတ္တာ စသည်တို့လုံလုံ လောက်လောက် မရှိခြင်း၊ ယာဉ်/လူ ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ မပြည့်စုံခြင်း စသည့် ပြစ်ချက်မျိုးစုံကို တွေ့ ခဲ့ရပြီး ခရီးသည်များအဖို့express ကားများအပေါ် ယုံကြည်မှု နည်းပါးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စမတ်ဖုန်း၊ Laptop နှင့် Tabletမှ အလင်းရောင်ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာနိုင်
စမတ်ဖုန်းများ၊ Tabletနှင့် Laptop ကွန်ပျူတာများမှ ထွက်ရှိသည့် အလင်းရောင် တစ်မျိုးသည် လူအများ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးပွားမှုနှင့် သွယ်ဝိုက်ဆက်နွယ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ သုတေသီများက စမတ်ဖုန်းကဲ့သို့ ကိရိယာများမှ ထွက်ရှိလာသည့် အပြာရောင် အလင်းများသည် နာရီပေါင်း အတော်များများ ဆက်တိုက်ထိတွေ့သည့်အခါ လူတစ်ဦး၏ ဆာလောင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးလာကြောင်း ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူတစ်ဦးသည် အစာရေစာ လုံလောက်စွာ စားသောက်ထားသည့်တိုင် ယင်းအပြာရောင် အလင်းနှင့် ရေရှည်ထိတွေ့ချိန်၌ သာမန်ထက် မြန်ဆန်စွာ ပြန်လည် ဆာလောင်လာတတ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုအခြေအနေက သာမန်ထက် အစာပိုစားပြီး ကိုယ်အလေးချိန် တိုးပွားလာစေရန် တွန်းအားတစ်ရပ်သဖွယ် ဖြစ်လာသည်။ အမေရိကန်မှ ပညာရှင်များသည် စမတ်ဖုန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် အလင်းရောင်က ဆာလောင်မှုကို လှုံ့ဆော်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိထားသည့်တိုင် အဘယ်ကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ဆက်စပ်မှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်နေသည် ဆိုခြင်းကိုမူ မဝေခွဲနိုင်သေးချေ။ အပြာရောင် အသားပေးထားသည့် အလင်းရောင် ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် မှိန်ဖျော့ဖျော့ အလင်းရောင် ထုတ်လွှင့်မှုများ နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်ချက်အရ လူတစ်ဦး၏ ဆာလောတ်မှာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း ပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ (၁၅)မိနစ်မျှကြာအောင် အပြာရောင် အလင်းနှင့် ထိတွေ့နေပြီးနောက် ယင်းသက်ရောက်မှု စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး (၂)နာရီမျှထိ ဆက်လက် တည်မြဲနေတတ်ကြောင်း သုတေသီများက ယုံကြည်ထားသည်။
ချီကာဂိုရှိ အနောက်မြောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှ ဦးဆောင်သုတေသီ အိုင်ဗီချောင်က “အပြာရောင် အဓိကပါဝင်တဲ့ အလင်းတွေက ခန္ဓာဗေဒ စနစ်တွေမှာ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီတွေ့ရှိချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က အလင်းရောင် ရင်းမြစ်တွေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးပွားမှု ဆက်နွယ်နေတာကို ခြေရာခံမိစေတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒီလိုဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာတော့ မသိနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြာရောင် အလင်းတွေနဲ့ ရေရှည်ထိတွေ့နေရင် ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်တွေ ပြောင်းလဲလာမယ်။ ပိုပြီးဆာလာမယ်၊ ပိုပြီးစားသောက်မယ်၊ အဲဒီတော့ ပိုပြီးဝလာနိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သုတေသီများသည် ယခုစစ်တမ်းအတွက် ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ (၁၀)ဦးကို အသုံးပြု စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (၄)ရက်ကြာ စမ်းသပ်မှုများအတွင်း မှိန်ဖျော့ဖျော့ အလင်းရောင်နှင့် ပုံမှန်ထိတွေ့သူများထက် အပြာရောင် အလင်းနှင့် ပိုမိုထိတွေ့ဖြစ်သူများက ယခင်ထက် အစားအသောက် ပိုများလာကာ ကိုယ်အလေးချိန်လည်း အတန်ငယ် တိုးလာကြောင်း သိရှိရသည်။
လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးပြုပြီး ပြည့်တန်ဆာ ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု အွန်လိုင်းပေါ်မှာကျယ်ပြန့်လာ
လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများကို အသုံးချပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြည့်တန် ဆာဈေးကွက် ရှာဖွေမှုကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ Facebook စာမျက်နှာများပေါ် တွင် လိင်ဝန်ဆောင်မှု၊ လိင် ဖျော်ဖြေရေး ဆိုသောခေါင်းစဉ်များ အောက်မှနေပြီး လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဈေးကွက်ရှာဖွေမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဘလော့်ဂါတစ်ဦး ဖြစ်သော ကိုမောင်မျိုးက News Watch ဂျာနယ်သို့ ပြောသည်။
''အခုနောက်ပိုင်း အတော်လေးများ လာပါတယ်။ လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခေါင်းစဉ် တွေကိုတပ်ပြီးတော့ ပုံစံအမျိုးးမျိုးးနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာကတော့ အရင် အစောပိုင်းကာလက ဒီစာမျက်နှာတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံကို တင်တယ်။ ပြီးတော့ နံပါတ် ပါပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ ဘယ်လိုပြဿနာတွေ တက်လဲမသိဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေပဲ ပေးတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ကိုတော့ Message Box ကပဲ ပေးတယ် လို့ သိရတယ်''ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါ လိင်ဖျော်ဖြေရေး၊ လိင် ၀န်ဆောင်မှု အစရှိသည့် စာမျက်နှာများ ပေါ်မှ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းယူပြီး ဆက်သွယ်ခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့နေ ကိုသော်တာက ''မန္တလေးက လူတွေအတွက် ဘာညာ ဆိုပြီး ရှယ်လာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်။ တကယ် ဖုန်းကိုင် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀န်ဆောင်ခကလည်း သူတို့တင်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ အိုကေ သွားတယ်''ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ များပေါ်တွင် အမျိုးသမီးငယ်လေးများ၏ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ လိင်ဝန်ဆောင်မှုဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားခြင်းမှာ အတုအယောင် ဓာတ်ပုံများလည်းပါရှိကြောင်း ရန်ကုန်နေ မသီတာက ပြောသည်။
''တကယ်တော့ ပြောသာပြောနေ တာပါ။ အချို့ပုံတွေဆို အတုအယောင် တွေပါ။ ကျွန်မ အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပုံကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုယူပြီး တင်လိုက်လဲ မသိပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စကို ကျွန်မတို့တော့ ဆိုင်ရာကနေ ရှင်းမယ်ဆိုပြီး message box က ပြောတော့ မှဖြုတ်ပေး လိုက်တယ်လေ။ အချို့ကိစ္စတွေက လုပ်တဲ့ လူတွေကိုယ်တိုင်က ယုတ်မာကြတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်''ဟု သူမက ပြောသည်။
“လိင် ဖျော်ဖြေရေး”ဆိုသော စာမျက်နှာတွင် ရန်ကုန်မြို့၏ မည်သည့် နေရာတွင် လိင်ဖျော်ဖြေရေး နေရာများရှိ သည်ကို တည်နေရာနှင့် အတိအကျရေး သားထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ပြည်တန် ဆာလုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် အတွက် အယခုကဲ့သို့ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လိင်ဝန်ဆောင်မှု ကျယ်ပြန့်အောင် ဖန်တီးနေခြင်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် ဆွယ်သည့် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သဖြင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရနိုင်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ က ပြောသည်။
“'ဒီကိစ္စကို အစိုးရက တရားဝင်မှ ခွင့်မပြုထားတာဘဲဗျ။ ဒီလို နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ အွန်လိုင်းမှာ ၀န်ဆောင်မှုအသွင်လုပ်နေတာကို ထောင် ချလို့ရပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး ဥပဒေနဲ့ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ဘယ်သူလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို အစိုးရက အစ ဖော်နိုင်တဲ့နည်းပညာ အကူအညီ မရှိတဲ့ အချက်ပဲ'' ဟု ၎င်းကပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါ လိင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ထားသော စာမျက်နှာများတွင် လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူ ထောင်ဂဏန်းနီးပါး Like လုပ်ထားခြင်းများ ရှိနေသည်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရသည်။
ကနေ့ ဘီပိုးရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တယောက်လာပြတယ်။ မကြာခင်မွေးမယ်။ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း ထိုးဘို့ ကာကွယ်ဆေးတမျိုး ရှာဝယ်ထားဘို့ ဆေးလက်မှတ်ရေးပေးပြီး ကူးစက်နိုင်ပုံတွေကို ရှင်းပြလိုက် တယ်။ သူပြောမှ ပြန်သတိရတယ်။ အရင်ကလေး သားဦးတုံးကလဲ ဘီပိုးရှိလျှက်နဲ့ ဆရာဘဲမွေးပေး ခဲ့တာတဲ့။ အရင်တခါဝယ်တာ ရူးပီး ၅ဝဝဝ ပေးရသတဲ့။ အင့်း့ သည်တခါလဲ အထူးသတိထားပြီး မွေးပေးရအုံး မှာဘဲ။ သည်တယောက်မွေးပြီးရင်တော့ ခြာထားပါကွာလို့ အကြံပေးလိုက်ရတယ်။ သူ့အသက်ကလဲ ငယ်သေးတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိရင် ဘီပိုး ရှိ-မရှိ စစ်ရပါမယ်။ ခင်ပွန်း၊ အဖေါ်ယောက်ျားမှာ ဘီပိုးရှိရင်၊ ကိုယ်က ဆေးရုံ-ဆေးခန်း-ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှာအလုပ်လုပ်ရင် ဘီပိုး ရှိ-မရှိ စစ်ဘို့ သူများတွေထက်လိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး မိခင်လောင်းမှာ ဘီပိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကလေးမွေးဖွါးနေတုံး ကလေးဆီကို ကူးစေနိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်နုကာစ မိခင်လောင်းမှာ ဘီပိုးရှိတာဆိုရင် ကလေးကို ကူးလာနိုင်ချေ ၁ဝ% ထက်နည်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရင့်ပြီဆိုရင် ၉ဝ% အထိရှိနိုင်တယ်။ ကလေးကိုကူးပြီဆိုရင်တော့ ဆိုးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ မခံစားရသေးပေမဲ့ ပိုးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကလေးဟာ ၉ဝ% ဟာ ရောဂါပိုးသယ်ပို့ပေးနေသူဖြစ်နေမယ်။ ကလေးကြီးလာရင်လဲ ၂၅% ဟာ အသဲခြောက်တာ၊ အသဲကင်ဆာနဲ့ သေဆုံးနိုင်တယ်။
မွေးပေးမဲ့ ဆရာဝန်ကနေ မွေးခန်းကြိုတင်ပြင် ဆင်မှုတွေ အသေအခြာ လုပ်ပေးမယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေ အဆင်သင့် ရှာထားမယ်။ ထိုးပေးမယ်။ အဲလိုမလုပ်ရင် မွေးလာမဲ့ကလေးကို ၅၉% ရောဂါကူးစက်လိမ့်မယ်။ နာတာရှည် အသဲရောင်ဖြစ်စေမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ ကလေးကို ဘာမှမဖြစ်စေပါ။ ဗိုက်ခွဲမွေးဖွးရင် ကလေးကို ကူးစေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းနည်းနေမယ်လို့ ယူဆကြသလို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မွေးမွေး မထူးဘူးလို့လဲ ယူဆကြတယ်။
At birth မွေးမွေးချင်းကလေးကို -
၁။ Hepatitis B vaccine ကာကွယ်ဆေး ပဌမအကြိမ် ထိုးပေးမယ်။
၂။ တခါတည်း Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) ဆေးလဲထိုးပေးမယ်။
အဲလိုဆေး ၂ မျိုးကို မွေးပြီး ၁၂ နာရီအတွင်းထိုးပေးနိုင်ရင် ကလေးကို ပိုးကူးဘို့ ၉ဝ% စိတ်ချနိုင်တယ်။ နောက် တလတိတိမှာ ဒုတယအကြိမ် နဲ့ ၆ လ အပြည့်မှာ တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ဆက်ထိုးဘို့ လိုတယ်။
Breast feeding ကလေးနို့တိုက်ခြင်း
မွေးမွေးချင်း ကလေးကို ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုးလုံးတိတိကျကထိုးပေထားရင် နို့တိုက်လို့လဲ ကလေးကိုကူးမှာကို ထူးပြီးစိုးရိမ်ရာမလိုပါ။ တချို့က အတိုက်မခိုင်းဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပင်ဆယ်လ်ဗေးနီးယားမှာရှိတဲ့ Centers for Disease Control (CDC) ဌာနအဆိုအရ မတိုက်ဘဲထားတာနဲ့ တိုက်တာတွေရဲ့ အဆိုး-အကောင်းတွေယှဉ်ရင် ကလေးကို နို့တိုက်သင့်တယ်လို့ ထောက်ခံ အားပေးပါတယ်။
• hepatitis viruses A အေ ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်တယ်။
• Acetaminophen (Tylenol)/Paracetamol (ပါရာစီတမော) ဆေးမသောက်ပါနဲ့။
• သွေးမလှူပါနဲ့၊ တခြား ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းလဲ မလှူပါနဲ့။
• သွားတိုက်တံ၊ ရေဇာ၊ လက်သည်းညှပ်၊ သူများတွေနဲ့ တွဲမသုံးပါနဲ့၊
• ဆေးရုံ၊ ဆရာဝန်တွေကို hepatitis B carrier ကိုယ့်ရောဂါရှိနေတာကို ပြောပြပါ။
• အနည်းဆုံး တနှစ်တခါ ဆရာဝန်ပြပါ။
• ကိုယ့်မိသားစု၊ ယောက်ျား၊ ဇနီး အတူနေတွေကို ရှင်းပြပါ။
• HBsAg test positive ဖြစ်သူဟာ အသဲအခြေအနေသိရအောင် Liver function testing ပါလုပ်ပါ။
Hepatitis B Virus (HBV) ဘီပိုး
ကူးစက်ခံရသူရဲ့ သွေးထဲမှာ အများဆုံးစုနေပြီး၊ တံတွေး၊ သုတ်ရည်၊ ဗဂျိုင်းနာအရည် နဲ့ အနာအဆာကနေ ထွက်တဲ့ အရည်တွေထဲမှာ နည်းနည်းသာတွေ့ရတယ်။ ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အခန်းထဲ အပူချိန်မှာ ၇ ရက်အထိလောက် ရှင်နေနိုင်တယ်။
ပိုးဝင်ခံတဲ့နောက် ရက်ပေါင်း ၉ဝ ကနေ ၆ လ အတွင်း လက္ခဏာပြမယ်။ ရက်တိုပိုးဝင်လက္ခဏာတွေကတော့ အစား အသောက်ပျက်မယ်၊ ပျို့ချင် အန်ချင်မယ်၊ ကိုယ်ပူမယ်၊ ဗိုက်နာမယ်၊ အသားဝါမယ်။ ဆီးဝါမယ်။ ဝမ်းအရောင် ပျော့မယ်။ ဘူတဝက်လောက်မှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာ မပြတတ်ဘူး။ ၁% လောက်ကတော့ သိပ်ဆိုးနိုင်တယ်။
ရက်တိုဖြစ်တဲ့သူတွေဟာ ကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင် ၉ဝ% နာတာရှည်ဖြစ်မယ်။ ၅ နှစ်အောက်ကလေး ၃ဝ% နာတာရှည် ဖြစ်မယ်။ လူကြီးဆိုရင် ၂-၆% နာတာရှည်ဖြစ်မယ်။ မိခင်မှာ ဘီပိုးရှိနေပေမဲ့ မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းတာ မဖြစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် နည်းတာ မပြည့်တာတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်လာအပ်ရင် ဘီပိုးရှိ-မရှိ သွေးစစ်တာကို hepatitis B surface antigen (HBsAg) ခေါ်တယ်။ သံသယရှိသူအားလုံး၊ ဥပမာ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဇနီး-ခင်ပွန်း-အဖေါ်တွေကို (HBsAg, antiHBc, antiHBs) တွေစစ်ရမယ်။
• HBsAg = negative, anti-HBc = negative, anti-HBs = negative ဖြစ်နေသူဆိုတာ၊ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချိန်မှာ ကူးမလားဘူးမပြောနိုင်ဘူး။ ရောဂါ မပြီးသူဖြစ်တယ်။
• HBsAg = negative, anti-HBc = positive, anti-HBs = positive ဖြစ်နေသူဆိုတာ၊ ပိုကောင်းတယ်။ immune due to natural infection သူဟာ မသိမသာပိုးအဝင်ခံထားရာကနေ သဘာဝအရ ရောဂါပြီးနေတယ်။
• HBsAg = negative, anti-HBc = negative, anti-HBs = positive ဖြစ်သူဟာ immune due to hepatitis B vaccination
• ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးထာလို့ ရောဂါပြီးနေသူ ဖြစ်တယ်။
• HBsAg = positive, anti-HBc = positive, IgM anti-HBc = positive, anti-HBs = negative ဆိုသူဟာ acutely infected လောလောလတ်လတ် ပိုးဝင်တာခံနေရသူဖြစ်တယ်။
• HBsAg = positive, anti-HBc = positive, IgM anti-HBc = negative, anti-HBs = negative ဆိုသူဟာ chronically infected နာတာရှည်ပိုးဝင်နေသူဖြစ်တယ်။
• HBsAg ရှိနေတယ်ဆိုတာ ပိုးလတ်တလောအဝင်ခံရသူဖြစ်တယ်။ ၃-၅ ပါတ်မတိုင်ခင်က ဝင်ခဲ့သူဖြစ်မယ်။ ပိုးဝင်ပြီး နလံထရင် (၃-၄ လ ကြာရင်) ဒါကို မတွေ့တော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ anti-HBs တွေ့လာမယ်။
• HBsAg positive ဖြစ်ပြီး၊ IgM anti-HBc မတွေ့သူဆိုတာ chronic infection နာတာရှည်ပိုးဝင်နေသူဖြစ်တယ်။
• HBsAg = negative, anti-HBc = positive, anti-HBs = negative ဆိုဟာ four interpretations possible (၄) မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
1. May be recovering from acute HBV infection ရက်တိုရာကနေ နလံထလာသူ၊
2. May be distantly immune and test not sensitive enough to to detect very low level of anti-HBs in serum ရောဂါကိုပြီးပေမဲ့ စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ သွေးထဲမှာ နည်းနေသူ၊
3. May be susceptible withafalse positive anti-HBc အပေါင်းပြတာ မမှန်လို့ ရောဂါပိုးဝင်တာခံရနိုင်သူ၊
4. May be undetectable level of HBsAg present in the serum and the person is actuallyacarrier သွေးစစ်တာမှာ နည်းလွန်းလို့ မပြပေမဲ့ သူများကို ကူးစေနိုင်သူ။
• အမေရိကားမှာ Recombivax HB (Merck and Co., Inc.) နဲ့ Engerix-B (SmithKline Beecham Biologicals) ၂ မျိုး သုံးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလဲထိုးနိုင်တယ်။ ကလေးတွေကို 0.5 ml ထိုးတယ်။ အသက် ၂ဝ အထက်ကို 1.0 mL IM ထိုးတယ်။
• Acute Hepatitis B ရက်တိုပိုးရှိသူနဲ့ ထိတွေ့လိုက်ရလို့ (လိင်ဆက်ဆံလို့) ဆိုရင် ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ HBV vaccine ထိုးပါ။ စုစုပေါင်း ၃ ခါထိုးရမယ်။ ချက်ချင်း၊ နောက် ၁ လ၊ ဒိနောက် ၅ လ။ နောက်ပြီး Hepatitis B immune globulin (HBIG) 0.06 mL/kg IM ကိုလည်း နောက် တင်ပါး၊ လက်မောင်းမှာ ထိုးပါ။
• တကယ်လို့ အရေပြား၊ အရေပြားနုရဲ့အပေါက်အပြဲ၊ ဒဏ်ရာကနေ ဝင်တာဆိုရင် HBIG ကို နောက် တလနေရင် တခါထပ်ထိုးပါ။
• Chronic HBV Infection နာတာရှည်ပိုးရှိနေသူကနေ (လိင်ဆက်ဆံတာဖြစ်ဖြစ်၊ အပ်-သွေးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်) ကာကွယ်ဘို့ hepatitis B vaccine တမျိုးထဲသာ လိုတယ်။
• Acute HBV infection ရက်တိုပိုးဝင်ခံရသူကို ရောဂါဆေးရယ်လို ပေးစရာမလိုပါ။ အထောက်အကူပြုကုသမှုသာ လိုတယ်။ သပ်ဆိုးသူကိုတော့ ဆေးရုံတင်ရမယ်။ Chronic hepatitis B နာတာရှည်ပိုးဝင်သူကို alpha-interferon ဒါမှမဟုတ် Lamivudine ဆေးပေးမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို ဒီဆေး ပေးနိုင်တယ်၊ မပေးသင့်ဘူး၊ အတိအကျ ပြောမရပါ။
(၂၄)နာရီအတွင်း အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်(၂)စင်း သီးခြားစီပျက်ကျ
Posted by drmyochit Saturday, June 07, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကြာသပတေးနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကယ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းဒေသတွင် ယခုကဲ့သို့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဟု ရေတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ တစ်ဦးက ဆိုသည်
အမေရိကန် ရေတပ်မှ တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းသည် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောပေါ် အဆင်းတွင် ပျက်ကျသွား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကြာသပတေးနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကယ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းဒေသ တွင် ယခုကဲ့သို့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဟု ရေတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ F/A-18E Super Hornet အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ်မှ လေယာဉ်မှူးမှာ အချိန်မီ ခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ရေထဲသို့ ကျသွားခဲ့သည်။ ၎င်းကို ရေတပ်က ဆယ်ယူခဲ့ပြီး ယခုအခါ အခြေအနေ တည်ငြိမ်နေပြီဟု သိရသည်။ USS Carl Vinson လေယာဉ်တင် သင်္ဘောပေါ် ဆင်းသက်ရန် လေယာဉ်ပျံဝဲ ချဉ်းကပ်လာရင်း ယခုလို ပျက်ကျခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် စစ်ဘက်သုံး တိုက်လေယာဉ်များ ပျက်ကျမှုသည် (၂၄)နာရီ မပြည့်မီ (၂)ကြိမ်ဆက် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းမတိုင်မီကလည်း ရေတပ်၏ AV-8B Harrier အမျိုးအစား လေယာဉ်တစ်စင်းသည် ဆန်ဒီယေဂို အနီးရှိ လူနေအိမ်ပေါ် ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ Super Hornet လေယာဉ်မှာမူ သင်္ဘောကုန်းပတ်အနီး ဆင်းသက်လာစဉ် လမ်းကြောင်းလွဲပြီး ရေပြင်နှင့် ရိုက်မိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေတပ်က ဆိုသည်။ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း လတ်တလောတွင်မူ လေယာဉ်ကို ပင်လယ်အောက်မှ ပြန်လည် ဆယ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
သုတ်ရည် ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ကလေးမရနိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ သက်တမ်းတိုနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်အရ ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကလေးမရရှိတဲ့ စုံတွဲပေါင်း ၇ ဒဿမ ၃သန်းရှိသည့် အနက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမျိုးသားတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပျက်ကွက်မှု နှစ်မျိုးနဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကာလထဲကနေ သင်ယူကြဖို့ - မောင်ကျော်စွာ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်) ပြီးခဲ့ တစ်ပတ်ကဆောင်းပါးနိဂုံးမှာ “နိုင်ပါလျက်နဲ့ အမြဲရှုံးနေရတဲ့ အနေအထားကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူလူထုစ...